Year 2010 - Myanmar Asian TV
Reign of Assassins (2010) #unicode ?Reign of Assassins ဟာ မငျမငျးဆကျကာလကိုအ‌ခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့ Michelle Yeoh ရဲ့ သိုငျးကားကောငျးလေးတဈကားပါ။ 15ကွိမျ‌မွောကျ Busan International Film ပှဲတျောမှာပွသခဲ့ပွီး တဈပတျအတှငျးဝငျ‌ငှေဒျေါလာ 4.5 သနျးရရှိခဲ့ပါတာမို့မလှတျတမျးကွညျ့သငျ့တဲ့ကားလေးနျော။ ?ပါဝငျတဲ့သရုပျဆောငျတှကေတော့ စနျးကငျြ/မိုးစကျ အဖွဈ Michelle Yeoh ကနျြးအာရှနျး အဖွဈ…
Narnia ဆိုတဲ့ ထူးခွားဆနျးကွယျတဲ့ မှျောကမ်ဘာလေးမှ ကွိုဆိုလိုကျပါတယျ… Narnia ဇာတျကားတှနေဲ့အတူ ငယျဘဝက အမှတျတရ ပုံရိပျတှဆေီကို တခေါကျလောကျ အလညျပွနျသှားကွလိုကျရအောငျ… Narnia ဇာတျကားမြားဟာ ကမ်ဘာကြျော British စာရေးဆရာကွီး C.S. Lewis ရေးသားခဲ့တဲ့ စိတျကူးယဉျစာပအေမြိုးအစားတဈခုဖွဈပါတယျ… စာအုပျအနနေဲ့ စုစုပေါငျး ၇ အုပျ ထှကျရှိထားပွီးတော့ ရုပျရှငျအနနေဲ့ကတော့ ၃ ကား ထှကျရှိထားပါတယျ……
Norwegian Wood ( 2010 )
ဝါတာနာဘေး ကီဇုကိ နဲ့ နာအိုကိုတို့ဟာ ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် အတူရှိကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ် … တရက်မှာ ကီဇုကိ ဟာ အကြောင်းပြချက်ရယ်လို့မရှိဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်သေသွားပြီးနောက် ဝါတာနာဘေး နဲ့ နာအိုကို တို့လည်း စိတ်ဒဏ်ရာကိုယ်စီရပြီး တမြို့စီမှာနေထိုင်ခဲ့တယ် … ဒီလိုနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ နာအိုကို နဲ့ ဝါတာနာဘေး တို့ ပြန်ဆုံကျတဲ့အခါ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နဲ့…
Death Bell2( 2010 )
Dealth bell 1 ကတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ အတော်လေး ကြည့်လို့ကောင်းခဲ့တယ်ဗျ အခု Dealth bell2မှာတော့ ရေကူးချန်ပီယံမလေး အသတ်ခံရမှုနဲ့ စခဲ့ပြီး သူ့ သေဆုံးမှုကို ကျောင်းသားတွေ ဆရာတွေက အစဖျောက်ထားပြီး………… သူ့ချစ်သူကောင်လေးပေါ် အပြစ်ပုံချရင်းကနေ သူ့ချစ်သူကောင်လေးက ထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက် ဘယ်လိုအငြိုးတွေနဲ့ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ ရေကူးချန်ပီယံမလေးကလည်း ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုသတ်လိုက်လို့ ဆရာတွေကပါ…
ဒီဇာတ်ကားလေးကို အားလုံးလဲ သိကြမှာပါနော် … 2010 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Animation လေးတစ်ခုပါ … DreamWorks Animation မှ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Budget ပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ 165 million အသုံးပြုပြီး ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေး တစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ် … ရုံတင်ပြီးချိန်မှာတော့ Box Office မှာ…
Oh! Invisible Man ( 2010 )
MMATV ရဲ့ 18+ ကား လေးပါ….. မြှီးကောင်ပေါက်အရွယ် လူငယ်တွေရဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အခိုက်အတန့်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်ငယ်ငယ်ကကော ဒီလို ပွေးခဲ့ဖူးသလားဆိုတာပြန်တွေးရင် တပြုံးပြုံးနဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။ ငယ်ကျွမ်း သူငယ်ချင်းရယ်၊ အိမ်နားက ကောင်မလေးရယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ အဆင်ပြေရင်း ဘယ်လို ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အဖွယ်ဖွယ်တွေက်ို၊ ရင်သပ်ရှုမောရင်း စူပါ ပါဝါမျိုးကို ကိုယ်သာ ရသွားရင်…
Love in Disguise ( 2010 )
အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့ 2010 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Romance နဲ့ Comedy ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားလေးဖြစ်တဲ့ “ Love is Diguise ” လို့ ခေါ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ … Main Cast တွေ အနေနဲ့ကတော့ ဂီတလောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသား Wang Leehom နဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဂူးဂူး ဆိုပြီး…
Charlie St. Cloud ( 2010 )
Drama , Fantasy ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ခုနောက်ပိုင်း အခွီကားတွေပဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရိုက်နေတဲ့ မင်းသား Zac Efron ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … ဇာတ်ကားအကျဉ်းကတော့ – ချာလီနဲ့ဆမ်ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကို၂ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ဝါသနာကို တစ်ယောက်ကလိုက်ကူညီပြီး အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ညီအစ်ကို၂ယောက်ပါ … တစ်နေ့ ချာလီက အထက်တန်းကျောင်းက ရွက်လွှင့်ပြိုင်ပွဲမှာ ကောလိပ်ဆက်တက်ဖို့…